က​လေးများအသက်အရွယ်အလိုက်…ဖြည့်​စွက်​စာ – Burmese Baby
Web Master | May 17, 2018 | Food | Comments
ျမနက်ပိုင်း 🕞.. 10:00 တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ပဲ အရင်စ..
ကျန်တဲ့ အချိနိမိခင်နို့ (or) Formula..
Rice ရယ် ကိုတစ်ပတ်ကျွေး Oat ကိုတစ်ပတ်ကျွေး..
စစကျွေးခြင်း..ကလေးစားဇွန်း နှစ်ဇွနိး..မိခင်နို့ ထက် အနည်းငယ်ပဲ ပျစ်..ကျဲကျဲလေးစ
မနက်ပိုင်း 🕞 10:00 နာရီ Oat +အသီးတစ်မျိုးမျိူးစမ်း..
ညနေ 🕞6:00နာရီ Rice သီးသန့် +မိခင်နို့ 
ကျန်တဲ့ အချိန် မိခင်နို့ တိုက်
၆လ ကလေးဖြည့်စွက်စာ.. (သုံးကြိမ်)
မနက်ပိုင်း ၇နာရီ… Oat +အသီးတမျိုးမျိုး..Cereal +အသီးတစ်မျိုးမျိုး…
နေ့ လည်၁၂နာရီ..home made( ဝါ စိမ်း နီ)စ
ညနေ..၅နာရီ… home made (ဝါ် စိမ်း နီ)
အားဖြည့်ဆန်..လူကြီးထမင်းစားဇွန်..းတစ်ဇွန်း မချက်ခင် ညမနက်စာ..
ချက်ပီး လူကြီးထမင်းစားဇွန်း ..၂ဇွန်း
ကျန်တဲ့ အချိန်တွေ မိခင်နို့ တိုက်
မနက်ပိုင်း ၇နာရီ..Creal, နို့, အသီးအမျိုးမျိူး,oat,6လအထက်မုန့် တွေ အကုန်ကျွေးလို့ ရ..
အားဖြည့်ဆန် မချက်ခင် လူကြီး စားဇွနိး တစ်ဇွန်းခွဲ သို့ နှစ်ဇွန်း
ချက်ပီး…လူကြီး ထမင်းစားဇွန်း..၃ဇွန်းမှ ၅ဇွနိးထိ ကျွေးနိုင်..
နေ့ လည် ၁၂ နာရီ Hm (ဝါ စိမ်း နီ)
နေ့ ခည် ၅နာရီ Hm (ဝါ် စိမ်း နီ)
ညဘက် ၈ နာရီ… Creal, နို့ . ကြက်ဥ,Oat,ပူတင်း အကုန်ရ..
သတိပြုချက်..**Baby လေးတွေက. ကြီးလာတဲ့ အတွက် အရသာသိလာ.. ထမင်းမစားချင်ဖြစ်လာမယ် ကျွေးရခက်လာမယ်…. ဘာမှုနိ့ ညာမှုန့် ထည့်လို့ မရတဲ့ အတွက် အချို အရသာပါအောင်… ပန်းသီး သစ်တော်သီး ချိုတဲ့ အသီးလေးတွေ puree ကြိုလုပ်ထား ကလေးစားခါနီး …နွှေးပီး ရောကျွေး…***
မစားချင်ရင် စူပုပ် စောင့်အောင်ရိုက်နှက် မကျွေးသင့်…
တစ်နာရီခြားတစ်ခါ… ခဏခဏ ပြန်ကျွေးသင့်… 😊
ကြက်ဥ စမ်းရန် ၇လ ကလေး
ကြက်ဥ မကျက်တကျက် အနှစ် အရင်စမ်း… ၃ရက်စမ်း..
နောက်နေ့်ကာစမ်း…၃ရက်စမ်း အဖုပေါက်လားကြည့်… Okပီဆို…ကြက်ဥ အကုန်ကျွေး..လို့ ရ…ကြက်ဥနဲ့ ပက်သက်တာ အမျိုးမျိုးလုပ်ကျွေး..
Chese ကျွေး… တပတ် သုံးရက်လောက်ကျွေး…စစကျွေးချင်း ရောနျောပီးကျွေး…မစားတတ်ရင် လည်ချောင်းကပ်လို့ .. Ok ပီဆိုမှ အတုံးလိုက်လေးကျွေး..
၆ ၇ ၈ ကလေး..
ငါးမျိူးစုံ… ကြကိသား မျိူးစုံ ကျွေးလို့ ရ အမျိုးမျိူးလုပ်ကျွေး..
ကွေကာလို အဖတ်လေးတွေက Oat ပါ'(.မြန်မာလို မုယောစပါး ပါ)
Cereal ကတော့ (နှံစားပြောင်း ကောက်ပဲသီးနှံပါ..)
Rice ကတော(့ ဆန်ချည်းပဲ သီးသန့် ကို ကြိတ်ထားတာ.ပါ..)
whole whiteကတော့..(ဂျုံမှုန့်.. နဲ့ လုပ်ထားတာတွေ)
multi grain က( သီးနံတွေ စပါ်းတွေ ဂျုံတွေ များပြားတဲ)့ အဟာရဓာတ်တွေပါ )
ကလေး အစားအသောက် မကိုင်ခင် လကိကို စင်ကြယ် စွာဆေးကြော. HandGel ဆောင်ထား… 😉
နို့ ဘူးဆေး ပနိးကန်ဆေးသီးသနိ့ ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ဆေးကြော
ပနိးကနိ အိုးခွက် သီးသန့် ထားရှိ..
ကျွေးပီးချက်ချင်းဆေးကြော.. အခြောက်ခံ…တနေ့ တစ်ခါ ရေနွေးပူပူနဲ့ ပိုးသတ်… ဖုန်မှုန်ိမကပ်ဆေရန်…အလုံ အုပ်ဆောင်းလေးနဲ့ ထားသို
Puree လုပ်ရန် အဆင့်ဆင့်…
ထောပတ်သီး ငှက်ပျောသီး…. ပျော့တဲ့ အသီးတွေ မပေါ်င်းပါ..အစိမ်းကြိတ် 🍌
၁.အသီးကိုအခွံခွါ.. Blander နဲ့ ကြီတ်..Puree ရပီဆို
၂.အဆင်သင့် Oat ကိုရေဖျော်.. ကြိတ်ထတဲ့ အသီးနဲ့ ရော..
Puree လုပ်ရန် အဆင့်ဆင့်..
ပနိးသီး ပန်းသစ်တော် သစ်တော်သီး ကန်စွန်းဥ (ဝါ နီ) မုန်လာဥနီ ရွှေဖရုံသီ….. 🍏 🍠 🍎
၁.အသီးတွေကို အခွံမခွါခင် ဆားနဲ့ ဆေး,အသီးတွေကိုခွါ..အတုံးအသေးလေးတွေတုံးပီးရင်.. ၁၅မိနစ်လောက်ဆားရေစိမ် ဆေး..ရေစစ်
၂.အသီးတွေကို ကြွေပေါင်းအိုးနဲ့ ပေါင် အနည်းဆုံးတော့ နာရီဝက်ပေါင်းတယ်..
၃.ခက်ရင်းနဲ့ ထိုးကြည့် နူးအိ ပြဲရင် ချ…
၄.အအေးခံ Blander နဲ့ ကြီတ်..
၅.Puree ရပီဆို အဆင်သင့်Oat ကို ရေနွေးဖျော် ရောပီးကျွေး
ရေသန့် သီးသနိ့ ပဲတိုက်ပါတယ်ရှင်.. ထမင်းကျွေးတဲ့ ချိန်ရယ်..နေ့ ခင်းတစ်ကြိမ်… ညဘက်တစ်ကြိမ်..တစ်ခါတိုက်.. ကလေးထမင်းစားဇွန်း လေးဇွန်းလောက်ပဲ တိုက်ပါတယ်…ရေကျက်အေးလုံးဝ မတိုက်ပါဘူး..ကလေးဝမ်းချုပ်မှာ စိုးလို့ ပါ…ရေသန့် ကလည်း Alpine တိုက်တာပါ..
Puree ရပီဆို.. အဖုံးလုံတဲ့ ခွက်လေးတွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာ Freezer အခနိးထဲ ထည့်သိမ်း…
တစ်ခါသိမ်း သုံးရက်စာပဲ သိမ်းရန်
တစ်ခါစားစာ ပဲ သိမ်းရနိ… (or)စားသလောက်ပဲ ခွဲထည့်ရန်….ဇွန်းက်ု သီးသန့် ထားပီး သုံးရနိ..
ကျွေးတော့မယ်ဆို ရေခဲသေတ္တာ ထဲကထုတ် ၁၅မိနစ်လောက် အပြင်မှာထား
ပီးမှ… အောက်က ရေနွေးထည့်ထားတဲ့ ခွက်နဲ့ နွှေးရန်…တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်.ရှင်…. ဘာများ..လိုအပ်သေးလဲမသိ….အလုထိတော့ အ့နည်းလေးအတိုင်းလုပ်လာတာ… မီးမီးတော့ ချောင်းဆိုး ချွဲကပ် ဝမ်းကောင်း ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်… ပါပဲရှင်..ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါရှင်.. 🚼 👄စေတနာဖြင့်.. 😊
***သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ မေမေများကိုလည်း တောင်းပနိပါတယ်ရှင့်. 😊*
Pork stew and potato steamed Rice သားသားရဲ့နေ့လည်စာ ဝက်စတူး အားလူးသီးစုံ ထမင်းပေါင်းအိအိလေးပါ ❤️❤️❤️